Xildhibaan Jeesow oo Madaxweynaha Jubbaland ku eedeeyay in uusan marna ka hadlin dhibaatooyinka Kenya ee Jubbooyinka – Kalfadhi
May 19, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan xubnaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa Madaxweynaha Maamulka Jubbland ku eedeeyay in uusan marna ka hadlin dhibaatooyinka Ciidamada Kenya ay ka geestaan Gobalada Jubbooyinka iyo Gedo.
Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay in Kenya ay dhibaatooyin badan ka geysatay Jubbaland maamulka halkaas ka jirana uusan marna ka hadlin arintaan si hoose iyo si saraba waxa uuna ku tilmaamay in ay ku qanacsan yihiin qorshaha Ciidamada Kenya ay ku dhibaataynayaan dadka Shacabka ah.
“Xukuumadda ayaa ku dhagannahay laakiin maamulka halkaas ka jira marna kama hadlin dhibaatada Kenya, xataa ma cambaareynin si hoose iyo saraba” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow. “Hab dhaqanka hogaamiyaha maamulkaas waxa uu na tusayaa in uu ku qanacsan yahay duqeymaha Ciidamada Kenya” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
Ciidamada Milateriga Kenya ee ku sugan Gobalada Jubbooyinka iyo Gedo ayaa lagu eedeeyay in ay dileen dad badan oo Shacab ah sidoo kalane ay bur buriyeen xarumo badan oo ay lahaayeen Shirkado Isgaarsiin oo ka howlgala degaanada Jubbaland.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay kulankooda caadiga ah ku dhageestay Warbixin looga hadlayo dhibaatooyin ay Ciidamada Kenya ka geestaan Jubbooyinka waxayna intoo badan ay ku taliyeen in Milateriga Kenya dalka laga saaro.